Uhlobo lwePen abavelisi kunye nabaxhasi - China Ipeni yoLungiso lweFektri
Iyachithwa iCarbon Dioxide Meter / CO2 Tester-CO230
Ukuchithwa kwekhabhon dioksayidi (CO2) yiparameter eyaziwayo eyaziwayo kwi-bioprocesses ngenxa yefuthe layo elibalulekileyo kwimetabolism yeseli nakwiimpawu zomgangatho wemveliso. Iinkqubo eziqhutywa ngamanqanaba amancinci zijongana nemiceli mngeni emininzi ngenxa yokhetho olunqunyelweyo lweemodyuli zokujonga esweni kunye nolawulo kwi-Intanethi. Iimvakalelo zesiko zinobunzima, zibiza indleko, kwaye ziyangena kwindalo kwaye azilingani kwiinkqubo ezincinci. Kolu phando, sibonisa ukumiliselwa kwinoveli, ubuchule obusekwe kwinqanaba lokulinganisa kwinqanaba le-CO2 kwii-bioprocesses. Irhasi engaphakathi kwiprosesa emva koko yavunyelwa ukuba iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe kwi-CO230.
Ukuqhuba / i-TDS / i-Meter yetyuwa / iTester-CON30
ICON30 ngamaxabiso ezoqoqosho, athembekileyo e-EC / TDS / eSalinity imitha efanelekileyo yokuvavanywa kwezicelo ezinje nge-hydroponics kunye negadi, iiphuli kunye ne-spas, ii-aquariums kunye neetanki zamanzi, ii-ionizers zamanzi, amanzi okusela nokunye.
Ukuchithwa kweMitha yeHydrojeni-DH30
I-DH30 yenzelwe ngokusekwe kwindlela yovavanyo oluqhelekileyo lwe-ASTM. Imfuneko yokulinganisa kukuxinana kwe-hydrogen enyibilikisiweyo kwimoya enye yamanzi e-hydrogen enyibilikisiweyo. Indlela yokuguqula isisombululo kwisisombululo sokuchithwa kwe-hydrogen kwi-25 degrees Celsius. Umlinganiso ophezulu umda ujikeleze i-1.6 ppm. Le ndlela yeyona ndlela ilula kwaye ikhawulezayo, kodwa kulula ukuphazanyiswa zezinye izinto zokunciphisa isisombululo.
Isicelo: Umlinganiso wamanzi oxineneyo ococekileyo we-hydrogen.
Ukuchithwa kweMitha yeOxygen / Yenza iMitha-DO30
Imitha ye-DO30 ikwabizwa ngokuba yi-Oxygen Meter okanye i-Oxygen Tester echithwayo, sisixhobo esilinganisa ixabiso leoksijini enyibilikisiweyo kulwelo, ebisetyenziswe ngokubanzi kwizicelo zokuvavanywa komgangatho wamanzi. Imitha ye-DO ephathekayo inokuvavanya ioksijini enyibilikileyo emanzini, esetyenziswa kwiindawo ezininzi ezinjengezilwanyana zaselwandle, unyango lwamanzi, ukubeka iliso kwindalo esingqongileyo, ukulawulwa kwemilambo njalo njalo. Ukuchaneka nokuzinza, uqoqosho kunye nokulula, kulula ukuyigcina, i-DO30 i-oksijini enyibilikisiweyo ikuzisela lula ngakumbi, yenza amava amatsha esicelo se-oksijini esinyibilikileyo.
I-Ozone Tester ichithwe / iMitha-DOZ30
Indlela yohlaziyo yokufumana ngokukhawuleza ixabiso le-ozone ngokusebenzisa indlela yenkqubo ye-electrode yokulinganisa: ngokukhawuleza nangokuchanekileyo, ukuthelekisa ukuya kwiziphumo ze-DPD, ngaphandle kokutya kwakhona. I-DOZ30 epokothweni yakho liqabane elikrelekrele lokulinganisa i-ozone echithwe nawe.
Imitha yasimahla yeChlorine Mester / Tester-FCL30
Ukusetyenziswa kwendlela ye-electrode ezintathu kukuvumela ukuba ufumane iziphumo zokulinganisa ngokukhawuleza nangokuchanekileyo ngaphandle kokusebenzisa naziphi na izinto ezenziwe ngombala. I-FCL30 epokothweni yakho liqabane elikrelekrele lokulinganisa i-ozone echithakeleyo nawe.
I-Ammonia (NH3) Tester / Imitha-NH330
Imitha ye-NH330 ikwabizwa ngokuba yi-ammonia nitrogen meter, sisixhobo esilinganisa ixabiso le-ammonia kulwelo, ebelisetyenziswe ngokubanzi kwizicelo zokuvavanywa komgangatho wamanzi. Imitha ephathekayo ye-NH330 inokuvavanya i-ammonia emanzini, esetyenziswa kwiindawo ezininzi ezinjenge-aquaculture, unyango lwamanzi, ukubeka iliso kwindalo esingqongileyo, ukulawulwa kwemilambo njalo njalo. Ukuchaneka nokuzinza, uqoqosho kunye nokusebenziseka lula, kulula ukuyigcina, i-NH330 ikulethela lula ngakumbi, yenza amava amatsha esicelo se-nitrogen se-ammonia.
(NO2-) Imitha yeNitrite yeMitha-NO230
I-NO230 imitha ikwabizwa ngokuba yimitha ye-nitrite, sisixhobo esilinganisa ixabiso le-nitrite kulwelo, ebelisetyenziswe ngokubanzi kwizicelo zokuvavanywa komgangatho wamanzi. Imitha ye-NO230 ephathekayo inokuvavanya i-nitrite emanzini, esetyenziswa kwiinkalo ezininzi ezinjenge-aquaculture, unyango lwamanzi, ukubeka iliso kwindalo esingqongileyo, ukulawulwa komlambo njalo njalo. Ichanekileyo kwaye izinzile, iyonga kwaye ilula, kulula ukuyigcina, i-NO230 ikulethela lula ngakumbi, yenza amava amatsha esicelo se-nitrite.
Imitha yedijithali ye-ORP / UkuNcitshiswa kweNgcaciso yeMitha enokubakho-ORP30
Imveliso eyilelwe ngokukodwa ukuvavanya amandla e-redox onokuvavanya ngokulula kuyo kwaye ulandele ixabiso le-millivolt yento evavanyiweyo. I-ORP30 yemitha ikwabizwa ngokuba yimitha enokubakho kwakhona, sisixhobo esilinganisa ixabiso lokubakho kwinto enamanzi, ebisetyenziswe ngokubanzi kwizicelo zokuvavanywa komgangatho wamanzi. Imitha ye-ORP ephathekayo inokuvavanya amandla e-redox emanzini, asetyenziswa kwiindawo ezininzi ezinjenge-aquaculture, unyango lwamanzi, ukubeka iliso kwindalo esingqongileyo, ukulawulwa kwemilambo njalo njalo. Ichanekileyo kwaye izinzile, iyonga kwaye ilula, kulula ukuyigcina, i-ORP30 enokubakho ekukuvuseleleni ikulethela lula ngakumbi, yenza amava amatsha esicelo esinokubakho.
pH Imitha / pH Uvavanyo-pH30
Imveliso eyilelwe ngokukodwa ukuvavanya ixabiso le-pH onokuluvavanya ngokulula kwaye ulandele ixabiso lesiseko seasidi yento evavanyiweyo. Imitha ye-pH30 ikwabizwa ngokuba yi-acidometer, sisixhobo esilinganisa ixabiso le-pH kulwelo, ebelisetyenziswe ngokubanzi kwizicelo zokuvavanywa komgangatho wamanzi. Imitha ye-pH ephathekayo inokuvavanya isiseko seasidi emanzini, esetyenziswa kwiinkalo ezininzi ezinjengezilwanyana zasemanzini, unyango lwamanzi, ukubeka esweni indalo esingqongileyo, umgaqo womlambo njalo njalo. Ukuchaneka nokuzinza, uqoqosho kwaye kulula, ukugcina kulula, i-pH30 ikulethela lula ngakumbi, yenza amava amatsha esicelo se-asidi.
Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Ph woluvo Electrode, Isilumko sokuSebenza kweTitanium, Isilumko seChlorophyll, Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo,